Fikarohana momba ny firaisana Ny fahakiviana teo amin'ny fiainana taloha ary iza aho tamin'ny fiainako taloha na fiainany? - Fikarohana Reincarnation
Fiainana taloha & iza aho tamin'ny fiainako taloha sa ny fiainako?
Fomba hahitanao ny fahamendrehan'ny fiainana taloha
Ny hafatra rehetra nalefako tamin'ny alàlan'ny tranonkalan'ny Reincarnation Research, dia ny fanontaniana napetraka matetika indrindra dia ny hoe: "Iza moa aho taloha?"
Ho an'ireo izay tsy manana fahatsiarovana mahavariana amin'ny fiainana taloha dia misy fomba roa azo ianarana momba ny fiainana taloha. Ny iray dia amin'ny famerenana ny famerenana amin'ny fiainana taloha ary ny faharoa dia ny manontany amin'ny sariaka na medium izay afaka mamantatra ny fiainan'ny mpanjifa taloha. Avelao aho hanazava ny tombontsoa sy ny fandrika amin'ny fomba roa samy hafa.
Fandresena amin'ny fiainana taloha
Amin'ny fiverimberenam-piainana lasa, ny mpandinika ny fitsaboana na ny mpitsabo dia mametraka mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso fitarihan-kevitra amin'ny fanantenana fa amin'ny toe-pahasalamana malaindaina, ny mpanjifa dia hamerina indray ny traikefa niainan'ny fiainana. Mipetraka ao amin'ny seza mahazatra ny mpanjifa ary voatendry hanidy ny masony.
Matetika ny suggelion dia natao avy amin'ny mpandrindra fa ny mpanjifa dia mamakivaky tetezana na miditra amin'ny ascenseur. Any amin'ny ilany ilany amin'ny tetezana na eo amin'ny gorodona ny fiakarana an-dàlana dia azo trandrahana ny fiainam-piainana taloha.
Ny fahatsiarovana ny fiainana taloha dia matetika hita maso, ahitana ny fiainana taloha. Ny zava-misy toy ny anarana manokana, toerana sy daty, izay mamela ny mpikaroka hikaroka sy hanandrana hanamarina ny traikefa niainan'ny fiainana taloha, dia sarotra kokoa amin'ny fidirana amin'ny famerenana. Ny tombony amin'ny fitomboan'ny fiainana taloha dia ny hoe raha toa ka mahomby dia afaka manana traikefa mivantana sy azo tsapain- Ny famerenana amin'ny fiainana an-davanandro, amin'ny lafiny iray, dia heverina ho endrika hypnose.
Amin'ny lafiny iray, ny fampahalalam-baovao diso dia azo raisina amin'ny alàlan'ny famerenana indray ny fiainana ary raha ny marina, Ian Stevenson, MD dia nihevitra fa tsy fitaovana mahasoa ho an'ny fikarohana momba ny firaisana indray ny famerenana. Ny antony dia hoe mora ho an'ny olona iray ny mihemotra amin'ny famerenana ny fahatsiarovana. Satria ny asan'ny fitsaboana ara-pahaizana momba ny fitsaboana taloha na mpanazatra dia ny manampy ny fahatsiarovana ny fiainana an-trano avy amin'ny mpanjifa, ny mpanjifa dia afaka mahatsapa ho voatery na voatery hitatitra ny fahatsiarovana ny fiainana taloha. Raha tsy mitranga ny fahatsiarovan-tena tampoka, indraindray, ny fahatsiarovana noforonina dia omena mba hahatonga ny fotoam-pahatsiarovana hahomby amin'ny client sy ny mpitsabo.
Raha ny hevitro, dia tokony hahafeno fepetra voafaritra ao amin'ny: Ireo Fitsipiky ny Fampodiana an-tokantrano
Nipoitra ny toe-javatra niainan'ny vatana vaovao, na dia fadiranovana aza ny fiainana
Na dia tsy nino aza i Ian Stevenson, MD momba ny fihemoran'ny fiainana taloha, dia misy tranga matanjaka ao amin'ny vatana vaovao indray noho ny fihemorana. Ny tranga iray toy izany dia misy ny kapitenin'ny polisy Robert Snow, izay nasongadina tamin'ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra Katie Couric tamin'ny volana septambra 2013. Ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao dia manome porofo fa ny fiainana taloha dia azo alaina amin'ny famerenana ny fiainana taloha. Ity tranga ity dia hodinihina amin'ny:
Ny raharaha momba ny fanambadiana gemblinan'i Carroll Beckwith | Robert Snow
Fihetseham-pandaminana fiainana taloha
Araka ny hevitro, ny filazalazana tsara indrindra momba ny hoe ahoana no fomba fitazonana ny fiainana any aoriana dia hita ao amin'ny lahatsarin'i Robert Snow milaza ny tantarany. Mba hijery, mandehana:
Ny niafaran'ny fiainan'ny polisy Robert Snow tamin'ny famerenana ny famerenana amin'ny laoniny ny lahatsary
Fahaizana momba ny fanambadiana Xenoglossy voavaha amin'ny alalan'ny fitsaboana na ny fisaintsainana
Xenoglossy dia ny fahafahana miteny fiteny izay tsy nianatra nandritra ny androm-piainany amin'izao fotoana izao. Ireo tranga ireo dia heverina fa manome porofo matanjaka momba ny vatana vaovao indray. Ny trangan-jaton'ny xenoglossy Ian Stevenson avy amin'ny hypnosis na ny mediation, teknika izay mifandraika amin'ny fahateren'ny fiainana taloha, dia ahitana:
Moa ve mila fanazavana momba ny fahasalamana ara-tsaina?
Ny teboka iray fitandremana hafa dia mifandraika amin'ilay teny hoe "therapist an'ny famerenana ny fiainana taloha", satria ny ankamaroan'ny olona manao famerenam-bidy dia tsy manana asa ara-pahasalamana ara-tsaina. Ny ankamaroan'ny olona laika dia mety manana fiofanana momba ny psikolojia na tsia, fa liana liana amin'ny vatana vaovao indray ary maniry hanompo.
Tsy olana izany raha toa ka miorina ara-pihetseham-po ny mpanjifa ary mandeha amin'ny famerenan-doha amin'ny fahalianana amin'ny fiainana taloha. Etsy ankilany, ny olona izay manana olana ara-pihetseham-po na ara-pahasalamana dia tsy maintsy mandalo fotoan-tsarotra efa nihemotra izay efa ela ihany koa izay mpitsabo manana fahasalamana ara-tsaina. Ho an'ny lahatahiry manerantany manerantany momba ny fiverenan-dRavalo taloha, mankanesa any:
Ny fitsangatsanganana an-dalan'ny mpialona sy ny fikarakarana fikarakarana
Ny fampahalalam-baovao taloha momba ny sôkika na ny mediam-John Edward
Ny fomba iray hafa hianarana momba ny fiainana taloha dia ny mandeha any amin'ny clairvoyant, olona iray izay manana fahafahana hiditra amin'ny fampahalalana amin'ny alàlan'ny fitaovam-pandrenesana. Andeha isika hamaritra ny maha-psychic ny maha-olona iray izay afaka miditra mivantana ny vaovao, raha misy olona iray miasa miaraka amin'ny vondron'olona fanahy izay manangona vaovao ho an'ny fampahalalam-baovao. Ireo fanahy ireo avy eo dia mandefa an-tserasera an-tserasera amin'ny alalan'ireto fampahalalam-baovao ireto, izay mandalo izany amin'ny mpanjifa. Ny fampahalalam-baovao malaza izay miasa amin'ny fomba mahazatra, sary an-kavanana, dia: John Edward, avy amin'ny TV Show Crossing Over
Mino aho fa ny psychic sy mediam-pianakaviana dia manana ny talenta mba hahafantarana tsara ny fiainana taloha, fa ny olana dia raha tsy misy olona manana traikefa be dia be amin'ny psychic na medium iray manokana, mba hahafahany manombana ny fahamarinan'ity olona ity Amin'ny fotoana dia sarotra ny mahafantatra raha marina ny voalazan'ny vaovao.
Fiainam-piarahamonina taloha teo amin'ny fiainana
Olana iray mety hipoitra ny hoe ny psychic na mpanelanelana amin'ny tontolo diso dia mety hampahafantatra amin'ny fomba diso ny mpanjifa fa olo-malaza izy ireo tamin'ny lasa nofo lasa. Tsy mitranga izany satria ny psychic na mpanelanelana dia manandrana mamily ny sain'ny client. Imbetsaka izany no mitranga noho ilay antsoiko hoe "fikambanana manan-danja", izay toerana anaovan'ny olona malaza mari-pankasitrahana ny fahatongavan'ny mpanjifa ho nofo. Ohatra, tsy Cleopatra, ny mpanjifa dia mety ho mpanolo-tsaina na sakaizan'i Cleopatra. Ity trangam-pifaneraserana manan-tantara ity dia mety hitranga amin'ny famerenan'ny fiainana taloha.
Ny Fikarohana nataon'i Gary E. Schwartz, PhD, avy amin'ny University of Arizona: Fanandramana HBO mahatafiditra an'i John Edward & Medium hafa
Raha te hianatra bebe kokoa momba ny fanombanana ny fahamarinan'ny fitaovana sy ny psychic dia mandehana any: Ny fanandramana niainan'i Gary E. Schwartz, PhD
Fampahalalana momba ny fiainana taloha niainan'i Kevin Ryerson & Ahtun Re
Afaka manome tolo-kevitra iray ho an'ny mpanelanelana iray aho, Kevin Ryerson, sary eo ankavanana, izay niara-niasa tamiko hatramin'ny 2001. Kevin dia mpanelanelana amin'ny tontolo iainana, izay midika fa miditra amina toerana misaintsaina izy ary mamela ny fanahy hampiasa ny vatany mifandray amin'ny olombelona. Ny teny hoe "mampita" dia matetika ampiasaina hilazana io trangan-javatra io. Tsy mahatsiaro tena i Kevin mandritra io dingana io ary tsy tadidiny izay mitranga mandritra ny fotoam-pivarotan-tsofina.
Kevin dia nandefa mpitarika fanahy iray antsoina hoe Ahtun Re ary amin'ny fiarahako miasa aminy, izay efa lasa efa ho folo taona izao, dia nanao fanombanana aho fa Ahtun Re dia afaka manao lalao taloha miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta. Indraindray, Ahtun Re dia afaka manome anarana manokana, daty ary toerana misy ny fiainana taloha, izay ahafahan'ny mpanjifa manamarina ny zava-misy taloha. Amin'ny tranga hafa, Ahtun Re dia afaka mamantatra ny fiainam-piainany taloha, ny toerana misy azy, ny asany, ny fifandraisana amin'ny fiainana taloha ary ny antsipirian'ny tenany manokana izay ahafahan'ny mpanjifa mikaroka ireo mpilatsaka ho fidiana amin'ny androm-piainany taloha.
Ny fivoriana fanaraha-maso amin'i Kevin sy Ahtun Re dia mety hitarika amin'ny fanamarinana ireo mpilatsaka hofidiana any an-toerana na fanamafisana ny toerana hafa hijerena. Azafady, avelao aho mba hizara fa tsy mahazo alalana ara-bola, na valisoa, ho an'ny referrals ho an'i Kevin, ary tsy mahazo ny fihenam-bidy momba ny fivoriana ataoko miaraka amin'i Kevin aho. Araka ny voalaza tetsy aloha, ny tranga farany momba ny fiainana dia tokony hihatra ny fepetra hita ao amin'ny: Ireo Fitsipiky ny Fampodiana an-tokantrano
Tranga izay mampiseho ny fahamarinan'i Ahtun Re amin'ny fanaovana famantarana ny fiainana taloha
teo ambany Celebrity Reincarnation Cases sokajy, dia voambara bebe kokoa ny asako miaraka amin'i Kevin sy Ahtun Re. Nisy andiana Core Cases novolavolain'ny Ahtun Re nivory izay tena mahatalanjona. Anisan'izany ireto:
Fiainana taloha ho an'i Ralph Nader
Fiainana amin'izao fotoana izao ho an'ny ekipa hatsikana Laurel & Hardy
Manao ny seho rehetra amin'ny alalan'ny finday i Kevin, izay tsara toy ny olona. Antsoiny hoe Tele-Readings izy ireo ary azo alamina amin'ny tranonkala.
Rehefa tonga tao amin'ny fehin-kevitra aho fa i Ahtun Re dia fanahy tena miavaka amin'ny fisarahana amin'i Kevin Ryerson, dia nanapa-kevitra ny hametraka fanontaniana lehibe momba ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny vatana aho ary ny tanjon'ny fiainana. Ny resadresaka nifanaovako tamin'i Ahtun Re dia nasongadina tao amin'ny bokiko:
Amin'ity fotoana ity, avelao aho hanazava fa nanao asa be dia be tamin'i Kevin sy Ahtun Re tamin'ny raharaha momba ny zafindrafitr'ireo olo-malaza aho satria miaina ao anatin'ny kolotsaina malaza izahay ary mino aho fa ireo karazana tranga ireo dia hampiady hevitra. Ny antony voalohany mahatonga ny olo-malaza dia ny mitarika ny saina amin'ny fikarakarana ny firazanana tsy miankina amin'ny fanjakana, indrindra fa ny asa nataon'i Ian Stevenson sy ny fianarany ny ankizy miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny fiainana an-jatony izay efa nekena. Raha ny hevitro, Tranga reincarnation an'ny Dr. Stevenson, amin'ny ankapobeny, dia manome porofo sy porofo momba ny fahaterahana indray ao amin'ny vatana vaovao.
Ryson-Semkiw Fitiavan-tena ho an'ny olona teraka indray
Ny Fikarohana momba ny firaisana ara-nofo dia afaka mitondra an'izao tontolo izao ho tia fihavanana sy handanjalanja
Ny antony voalohany tadiaviko hijerena ny fikarohana momba ny firaisana amin'ny vatana dia noho izy mampiseho fa afaka manova ny finoana, ny zom-pirenena, ny lahy sy ny vavy, ny firazanana sy ny foko avy amin'ny fiainana iray manontolo. Misy rohy mankany amin'ireto karazana tranga ireto dia omena etsy ambany. Io fandinihana io dia afaka manampy amin'ny fampiroboroboana an'ity tontolo ity ho toerana milamina kokoa, satria ny ady dia miorina amin'ny fahasamihafana eo amin'ireo marika ara-kolotsaina momba ny maha-izy azy. Fotoan-dehibe iray taloha momba ny fiainana amin'ity raharaha ity dia ny: Trangan-javatra momba ny Reikarnasionan'i Anne Frank Barbro
Firaisana ara-piraisana ara-piraisana ara-nofo amin'ny fanovàna ny finoana, ny maha-olom-pirenena, ny hazakazaka sy ny maha-olona